ခန်းမရဲ့ YouTube ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင် | Apg29
ခန်းမရဲ့ YouTube ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်
သင်းအုပ်ဆရာ pair တစုံ Stefan နဲ့ Mary Hallman YouTube ကနေပိတ်ပင်ထား&#
မာရိသညျ Hallman YouTube ကိုအပါအဝင်အနေနဲ့အစောပိုင်းကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကနေ။
Stefan နဲ့ Mary Hallman ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်ကြောင့်မှ YouTube ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်သင်းအုပ်ဆရာ "YouTube ရဲ့တားမြစ်ချက်မူဝါဒကိုအမုန်းစကားထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်ပြင်းထန်ချိုးဖောက်မှုများ။ "
သင်းအုပ်ဆရာ pair တစုံ Stefan နဲ့ Mary Hallman Facebook နှင့် YouTube ပေါ်မှာMyresjöfönsterနှစ်ဦးစလုံး၌သူ၏စတူဒီယိုကနေတိုက်ရိုက်လွှလှေတျတျောမူခဲ့သညျ။ ယခုမူကားမိမိတို့၏ယူကျု့ချန်နယ်သူတို့လုပ်ဘူးသောမြေပေါ်တွင်ကို Google-ပိုင်ကုမ္ပဏီမှဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ "အမုန်းတရားမိန့်ခွန်းတားမြစ်၎င်းတို့၏မူဝါဒ၏ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်မှုများ" ။
မေးလ် Youtube ကိုအဖြစ် shutdown ချခန်းမရဲ့အရန်စေလွှတ်တော်မူလျှင်။
Stefan Hallman ကြောင့်လည်းသူကပြောပါတယ်တယ်သောအီးမေးလ်တွင် "အခြား YouTube အကောင့်ပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်အတွက်ဖွင့်လှစ်မနိုင်" ။ ရပ်ဆိုင်းမှုကိုအစဉ်အမြဲနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သှားဖို့ကြိုးစားနေ ၎င်းတို့၏ရုပ်သံလိုင်း ဒီစာသားကိုနေဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး:
web ပေါ်မှာ embedded ဖြစ်နေဆဲတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေကြောင့်ဒီတူ:
Stefan Hallman အပေါ်ပြောပါတယ် Facebook က :
"ကျနော်တို့က 461 subscribers တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်အစဉ်အမြဲပိတ်ထားဖြစ်ကြောင်းအံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ပါ။ "
သူတို့ခိုင်ခံ့စေ၏ကတည်းကအဆိုပါလိုင်းများကိုယူကျု့မှပိတ်ပင်ထားပါလိမ့်မည်, ငါတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖတ်ပါနှင့်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ မူဝါဒများ ။ ခရစ်ယာန်နှင့်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မကြာသေးခင်ကကျနော်အခြားခရစ်ယာန်ရုပ်သံလိုင်းကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဖတ်ပါ။ ငါဆန့်ကျင်တုံ့ပြန်များနှင့်အရာခပ်သိမ်းနှင့်အတူသဘောတူမတစ်ဦးကရုပ်သံလိုင်း။
ငါသည်လည်း 200 မွတ်စလင် channel များကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းကြားရပြီ။ သူတို့က Isis ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်ပိုပြီး run ပါပြီ။
ကျွန်မလည်းငါတို့ကပိုပိတ်ပစ်မြျှောလငျ့နိုငျနိုင်အောင် Youtube ကို ပို. ပင်တင်းကြပ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကြားရပြီ။ ဤတွင်ခရစ်ယာန်နှင့် Non-ခရစ်ယာန်တွေဟာနှစ်ဦးစလုံးခံစားနေကြရသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးသညျယရှေုခရစျ၏သတင်းစကားကိုရောက်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှ blogging နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုခံရလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ကျွန်မ 2007 ခုနှစ်ဘလော့ဂ် site ကိုငါ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပြုသကဲ့သို့ဤသည်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ငါ၏အသဘောထားကိုဖြစ်ခဲ့သည်။